Hiran State - News: Banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Shiikh Shariif oo ka dhacay gobolada Jubooyinka.
Banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Shiikh Shariif oo ka dhacay gobolada Jubooyinka.
HS:-Banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Shiikh Shariif oo ka dhacay gobolada Jubooyinka iyagoo ku tilmaamay Shariifka inuu doonayo in ururka Shabaab xoog ku sii heytaan dalka Somaliya.
Shiikh shariif oo aan aheyn siyaasi rasmi ah waxuu koofurta Somaliya ku maamula hadba sida uu markaasi jecel yahay mana fiiriyo maslaxada guud ee umada Somaliyeed isagoo markasta jaanis u siiya sidii ay wadanka ugu sii nagaadi lahayeen kooxaha argagixisada ah ee dalka iyo dadka Somaliyeed dhibta ku haya.
Xili kasta oo la doonayo in la wiiqo Shabaab iyo Al-qacida waxuu keenayaa siyaasado u sahlayo iney dalka ku sii nagaadaan. hadaba waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Shariifka kadib markii ay dadku maqleen 24tii saac ee ugu danbeysay in Shariifka gudaha Somaliya u joogaan ciidamo dhawr boqol ah oo ka tirsan ururka Shabaab oo isaga toos uga mar qaata.
Shacabkani oo maalintii shaleyto aheyd u riyaaqay hadalkii uu dowlada Kenya kaka soo horjeeday Shariifka ayaa hada marka dhinaca kale laga eego xaalada u muuqda kuwo ka warhelay in Shariifka ka tirsan yahay Shabaab. wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaaraya gudaha magaalada Mogdisho ayaa shegaya in ciidamo kor u dhaafayo amaba ku dhaw 700 oo maleeshiyo ka tirsan Shabaab iyo horjoogayashooda oo doonayey iney isku soo dhiibaan TFGda Shariifka kula heshiiyey iney magacooda sii heystan mushaarna isaga siin doono kuwaasi oo intooda badan qeyb ka tirsan magaalada Mogdisho sida xaafada Hurwaa la dejiyey iyagoo dharka shacabka loo geliyey markii la doonana loo isticmaalo howlaha u gaarka ah Shariifka iyo xulufadiisa.
Dibad baxyada laga dhigay Jubooyinka waxey ka marqaati kacayaan siyaasad xumida TFGda iyo sida aysan u aheyn nidaam meteli kara bulshada Somaliyeed.TFGda oo mudo 2 sano ka hor lumiyey shacabka gobolada dhexe kadib markii ay reer Hiiraan ka soo horjeesteen waxkasta oo uu doonayey inuu Shariifka kula korkortamo maadama uusan diyaar u aheyn in wadanka laga hirgaliyo nidaam iyo kala danbeyn sikastana iskugu dayey inuu heshiis beleed la galo beesha isaga waxkasta ka hortaagan iney uga fulaan Hiiraan ayaa hada u muuqda mid luminaya shacabka Jubooyinka oo miisaan culus ku leh siyaasada Somaliya.
Shaki kuma jiro in Somaliya ka dhalan doonto dowlad rasmi ah laakisne bulshada Somaliyeedna siyaasada ugu midoobi doonaan hadba sidey isku fahmaan maadama ay mesha ka baxday waxii la dhihi jiray reer hebel iyo qabiil hebel oo sida muuqata hada ku danbeysa oo kaliya magaalada Mogdisho, hadane marka dhinaca kale laga eego Shariifka waxuu siyaasada ka tagi doonaa isagoo cadaawad badan u sameeyey beeshiisa.
Waxuu ka soo horjeestay inuu la shaqeeyo oo soo dhaweeyo maamulkasta oo laga hirgaliyey Hiiraan hadey noqon laheyd midkii ay hogaaminayeen rag ku fikri ahaa midawgii maxkamadaha waxaa kale oo la dhisay Hiiraan State oo ay bulshada Hiiraan juhdi galiyeen oo waliba lagu dhisay dhaqaalo ka yimid shacabka degaankaasi. waxuu xitaa garan waayey inuu la shaqeeyo midkoodna kooxahii Hiiraan State mucaaradka ku ahaa.
Hada waxuu shacabka Jubooyinka oo uu dowlada Kenya kula heshiiyey iney soo galaan wadanka uga soo horjeedaa armey meesha ka dhalataa maamul ay dadka degankaasi doonayaan amaba jubooyinka gacanta u galaa maamulka Azania oo hada u muuqda midka aadka loo hadal hayo inuu degaanadaasi la wareegi doono dhawaantan sida warar kala duwan lagu helayo.
Hadaba hadii Shariifka hogaamiye Somaliyeed yahay maxaa u diidayo inuu wax ka toos toosiyo isku daykasta ee ay ku dhaqaaqaan qeybo badan oo bulshada ka tirsan oo doonaya in wadanku ka dhaco isbedel.
Shaki kuma jiro in shaqsiyaadka uu hada isleeyahay isku siyaasad ayaad tahiin amaba ka soo jeeda Puntland iney meel cidla ah uga taki doonaan kedibna waqtiga ka dhamaan doono isagoo ugu yaraan siyaasad xumo ku reebi doona beeshiisa ileen waxa u hada sameynayo cid kale oo ay dhibaato ka soo gaareyso ayaanba jirin oo shacabku deganadooda iyagaa u tashan doona marka laga baxo xiliga kumeel gaarka.
Markaad aragto sida uu Shariifka u hadlay shaleyto iyo sida uu maanta warka u dhigay C/wali Gaas waxaa ku soo baxeysa in uusan jirin isku xinaansho ka dhaxeeya TFGda.
· admin on October 25 2011 14:41:04 · 0 Comments · 2098 Reads ·
14,568,452 unique visits